भूकम्पसँगै आन्तरिक विवादले थलिएको निर्माण सामाग्री व्यापार महासंघ अझै तङ्ग्रेन किन ?
मुद्दा हालेर प्यारालाइज्ड बनाउँदा के पायो चितवनले ? कति गुमायो महासंघले, कस्तो पाठ सिक्यो त संस्था भन्दा पनि आफ्नै व्यवसाय ठूलो ठान्ने यो क्षेत्रले ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | २०७२, वैशाख १२ को भूकम्पले निम्त्याएको क्षति पछि मुलुक पुनर्निर्माणको सुनौलो युगमा प्रवेश गरेको सबैलाई थाहै छ ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकका १४ जिल्ला गएका पौने ३ वर्षदेखि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । तिनले चाहेको समयमा उचित दर रेटमा सक्कली निर्माण सामग्री पनि पाइरहेका छैनन् ।
एकातिर निर्माण सामग्रीको कुरा छ, अर्काेतिर निर्माण सामग्रीको कालोबजारीको पनि आवाज उठिरहेको छ ।
यतिबेलै भारतले क्लिंकरमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएकाले निर्माण सामग्रीको बजारमा भारतीय एकाधिकारसँग नेपाली निर्माण सामग्री बजार लड्न सकिरहेको छैन ।
र, झनै महत्त्वपूर्ण कुरा त राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ‘निर्माण सामग्री बैंक’ नै खोलेर पुनर्निर्माणको महायज्ञ सम्पन्न गर्न निजी क्षेत्रको सहयोगको अपिल समेत गरेको पस्थितिमा नेपाली बजारमा निर्माण सामग्रीसँग जोडिएर व्यवसाय गरिरहेको सरोकारवाला संस्था नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार महासंघ भने भूकम्प सँगै थला पर्यो ।
अझै उठ्न सकेन, किन ?
निर्माण सामग्री महासंघको यसरी सुरु भो रामकहानी,
करिब ३ वर्ष अघि हेटौंडा अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विरुद्ध निर्माण सामग्री व्यापार संघ चितवनले मुद्दा दायर गर्यो ।
अधिवशेनबाट केही गर्छु भन्ने नयाँ सोच बोकेर युवकराज भण्डारी नेतृत्वको टोली राजधानी छिर्यो । तर हेटौंडा अधिवेशन हलले संस्था बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्ने थियो, विवादको बीजारोपण भयो, चितवनका प्रतिनिधिहरुबाट ।
‘संस्था बनाउने कि संस्था भत्काउने भन्ने जस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो,’ निर्माण सामग्री व्यापार महासंघ सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, ‘हलबाट संस्था बनाउने जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्नेमा केही मित्रहरुले नियोजित रुपमै संस्था भत्काउने तगारो बोकेर आउनु भएको रहेछ । पद बाँडफाँडलाई लिएर उहाँहरुले मुद्दा नै हाल्न जानु भयो । मुद्दा नै हालिसके पछि काम गर्ने उत्साह कसलाई पो आउँछ र ?’
नेपाल जस्तो सानो मुलुकको अर्थतन्त्र नै सानो छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रबाट २–४ लाख लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुले संस्थामा ‘राजनीति’ गर्न थाले पछि महासंघ भित्र व्यावसायिक व्यक्तिहरु भन्दा पनि राजनीति गर्ने सोचका मान्छेहरुको प्रवेश भएजस्तो आज आएर देखिन गएको गुनासो बढिरहेको छ ।
कुन पद महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि निजी क्षेत्रले व्यावसायिक हित र संस्थागत उन्नतिबारे सोच नराख्नु आफैंमा लज्जास्पद कुरा थियो । किनकि, महासंघको अधिवेशनको केही महिना लगत्तै नेपालले निर्माण सामग्री जस्तो महत्त्वपूर्ण पक्षको भूमिका खोजिरहेको थियो ।
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले देश त थलियो थलियो, महासंघ चाहिँ झनै नराम्ररी थलिन पुगेछ ।
के पाए मुद्दा हाल्नेले ?
स्रोत अनुसार, मकवानपुर हेटौंडाको अधिवेशनको नेतृत्व नमान्दै मुद्दा हाल्दा चितवन संघका केही अधिकारीहरुले आफूलाई ‘राम्रो’ पद नपाएको चर्काे आवाज उठाएका थिए ।
मुद्दा हालेपछि आजसम्म नै कुनै पद पाए न त मुद्दा हाल्न तम्सनेहरु मुद्दा फिर्ता गर्न वा अघि बढाउन नै आए । मुद्दा हालेपछि मुद्दा हाल्ने पक्ष नै निष्क्रिय हुने जस्तो मजाकको घटना बन्यो मुद्दाको कहानी ।
यस्तो गैरजिम्मेवार मुद्दाले आखिर संस्थालाई असफल बनाउने योजना रहेको स्पष्टै देखिने एकथरीको आरोप छ ।
‘नत्र संस्था विरुद्ध मुद्दा हाल्नु भनेको कि त संस्थालाई बेकामे बनाउने हिडेन इन्ट्रेस्ट हुनु पर्छ,’ उपत्यकामा सक्रिए संघका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘नत्र भने मुद्दा हाल्ने पक्ष मुद्दाकै पछि त लाग्नु पर्छ नि !’
‘आज आएर के पुष्टि भएको छ भने,’ नाम नबताउने सर्तमा उनले भने्, ‘यस्तो खेलका पछाडि कि कुनै नियोजित खेल थियो । या त अध्यक्ष सहितको कार्यकारी समिति पंगु बनाउने या त काम गर्न नदिने योजना थियो ।’
मुद्दा हाल्नेहरु मुद्दा प्रति जवाफदेही नहुनुले दालमे कुछ काले भन्ने आशंकालाई बल पुगेको उनको तर्क छ ।
नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा विदेशी सामानले जहिले पनि एकाधिकार जमाउने गर्छ । सबैले भूमिका अपेक्षा गरिरहेको बेला निर्माण सामग्री व्यापार महासंघको यस्तो हविगत हुँदा विदेशी बजार विस्तारकर्ता र नेपाली बजारमा औसर छोपेर कमाउ धन्दा गर्न पल्केकाहरुलाई बल पुगेको छ ।
भारतीय बजारसँग जोडिनेहरु नेपालमा हुर्कदै गरेका संस्था विरुद्ध पनि गतिविधि गर्न पछि नपरेका विगतका केही उदाहरणबाट निजी क्षेत्रले पाठ सिक्नु पर्ने निर्माण सामग्री विज्ञहरुको सुझाव छ ।
किन सुनुवाइ भएन त आवाज ?
हेटौँडामा अधिवेशन हलमा जम्मा भएका चितवनका व्यवसायीले ‘आफूलाई कम महत्वका पद दिएको’ भन्दै बहिष्कार गरेपछिको विकसित परिस्थिति हो महासंघको आजको यस्तो दुर्दसा । समयक्रमले चितवन पक्षको आवाज समयमै सुनुवाइ नभएको सन्देश गएको देखिन्छ ।
नेतृत्व लिए पछि अध्यक्ष बनेका युवकराज भण्डारी सहित महासचिवले पनि आफ्नो व्यवसायलाई बढी महत्त्व दिएको तर संस्थामा उठेका आवाजलाई लिएर पहलकदमी नलिएको एक पक्षको भनाइ छ ।
तर, आफूले हदैसम्मको प्रयत्न गर्दा पनि मुद्दा हाल्नेसम्मको काम भएपछि आफूमाथि अन्याय परेको फिलिङ भएको वर्तमान पदाधिकारीहरुको गुनासो छ ।
यसै विषयमा जानकारी लिदा निर्माण सामाग्री व्यापार महासंघका अध्यक्ष युवकराज भण्डारी भन्छन्, ‘मौकाको फाइदा लिने र सेवा गर्ने बीचको संघर्षले गर्दा महासंघ निष्क्रिय भएको हो ।’
‘अहिले बजारमा निर्माण सामाग्रीको भाउ मनपरी तरिकाले बढिरहेको छ । र पनि व्यवसायी साथीहरु नै एकजुट हुन नसकेका कारण हामीले खुलेर यसको विरोध गर्न सकेका छैनौं, अध्यक्ष भण्डारी गुनासो गर्छन् ।
उनले थपे, ‘हामी यत्तिकै चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ । अब माघसम्म हामी भेला भएर छलफल गरेर नयाँ कार्यसमिति गठन गरी अगाडि बढ्ने तरखरमा छौँ ।’
निर्माण सञ्चारसँग कुरा गर्दै महासचिव कृष्ण मुरारी न्यौपानेले भने, ‘आन्तरिक विवादका कारण काम गर्न नसकेको पक्कै हो, एक्सनमा जान सकिएन । अब आउने माघ या फागुन भित्र अधिवेशन गरेर नेतृत्व सुम्पिने तयारीमा हामी छौं । हामी हिजो के भयो भनेर अब विवाद लम्ब्याउने पक्षमा छैनौं । किनकि अवधि सकिएपछि नेतृत्व सुम्पने हो । अब बेला भएको छ ।’
सुरु सुरुमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको र पछि पछि समस्या बल्झदै गएको महासंघ पदाधिकारी स्वीकार गर्छन् ।
निर्माण सामग्री व्यवसायीहरु संस्थागत उन्नयनमा भन्दा पनि बढी निजी व्यवसायमा मात्रै केन्द्रित हुनेहरु नेतृत्वमा अएकाले विवाद समाधान नभएको एकथरीको आरोप छ ।
के तर्क थियो चितवन पक्षको ?
हटौंडा अधिवेशन भन्दा अघि चितवनबाटै संस्थाको विधान संशोधन भएको थियो । पदाधिकारीको ३ बर्से कार्यकाललाई चितवन साधारण सभाले २ बर्से बनाएको थियो ।
तर, सो विधान अघिल्लो नेतृत्वले नसच्याएको पाइएपछि ३ बर्से नै गरेर देखाउने दम्भ नेतृत्वको रहेको चितवन पक्ष बताउँछ ।
नाम नखोल्ने सर्तमा एकजनाले भने, ‘यदि २ वर्ष भित्र महाधिवेशन गर्ने सोच थियो भने आज ३ वर्ष बितिसक्ता पनि किन अधिवेशन बोलाइएन त ?’
चितवन साधारण सभाले पारित गरेको विधान मनलागी गरेपछि समस्या निस्किएको तर आफूहरुलाई कुन पदमा को बस्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण नरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
०६८ जेठ २३ मा निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर तथा व्यावसायिक हक हितका लागि भन्दै यो संघ दर्ता भएको थियो ।
अत्यन्त ऊर्जा र उत्साहका साथ महासंघसम्म विकास विस्तार भएर महासंघ बन्दासम्म २६ जिल्लामा संघ विस्तार गरिसकेको यो संस्थाको पछिल्लो निष्क्रियताका कारण यतिबेला १२– १४ संघहरु मात्र सक्रिय छन् ।
उद्देश्य अनुरुप निर्माण सामाग्री व्यापार महासंघले यतिबेला उद्देश्यअनुरुप निर्माण सामाग्रीको गुणस्तरका विषयमा वकालत गर्न सकेको छैन । न त आफ्नो मन फुकाएर नै गतिविधि गर्न सकेको छ ।
२०७० सालमा नै २६ जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको महासंघको हालको दयनीय अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाले आफूहरु दुःखित भएको निर्माण सामाग्रीका व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यस बीचमा भक्तपुर संघले भने केही कार्यक्रम गरेको छ ।
संस्थागत भन्दा पनि व्यक्तिग मुनाफामुखी भएर कहाँ चल्छ संस्था ?
नेपालमा पछिल्लो चरणको बजारको अवस्थालाई हेर्ने हो भने टेलिकम्युनिकेसन र अटोमोबाइलले जिडिपीमा पुर्याएको योगदानपछि निर्माण सामाग्री व्यापारले तेस्रो स्थान ओगट्ने बताउँछन् निर्माण समाग्री व्यापार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष विनोद केशरी उपाध्याय ।
उनी भन्छन्, ‘भूकम्प पछिको पुनः निर्माणमा बढ्दै गएको निर्माण सामाग्री र संघीय संरचनाले बढाएको निर्माणको भोलुमलाई हेर्ने हो भने निर्माण सामाग्रीको योगदान दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।’
संस्थापक अध्यक्ष उपाध्यायको निर्माण सामाग्री व्यापार महासंघको वर्तमान नेतृत्वलाई कार्यसमितिले नै सहयोग नगरेका कारण महासंघ सुस्त भएको ठहर छ ।
नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले व्यक्तिगत मुनाफा भन्दा पनि संस्थागत हितलाई हेर्नुपर्ने र टिमलाई मिलाएर नेतृत्व गर्नु पर्ने क्षमताको जरुरी हुने उनको बुझाइ छ ।
अब राज्य नै संघीय संरचनामा गए संगै निर्माण सामाग्री व्यापार महासंघको पनि नेतृत्व परिवर्तनको समय आएकाले नयाँ सोच र भिजनका साथ महासंघ अगाडि बढ्ने कुरामा समेत उनी विश्वस्त रहेको निर्माण सञ्चारलाई बताए ।
मुद्दा विचाराधीन कहिलेसम्म ?
यसबारे बोल्दै भक्तपुर निर्माण सामग्री व्यापार महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा निर्माण सामाग्री व्यापार संघका अध्यक्ष सिद्धिनारायण आचार्यले भने, ‘३ वर्षअघि हेटौँडामा महाधिवेशन हुँदा चितवनका साथीहरुले हामीलाई प्रमुख पद भएन भनेर विरोध गर्दै महासंघको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै कुरा दोहोराए ।
उनका अनुसार त्यो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
उनले भने, ‘त्यस कारण संस्थाप्रति निर्माण व्यवसायी संघ तथा उद्योग व्यवसायी संघको विश्वसनीयता घट्न गएको हो । आन्तरिक विवादले गर्दा नै हामीले हाम्रो महत्व बुझ्न नसकेका कारण आज महासंघ यस्तो अवस्थामा आइपुगेको हो ।
भूकम्प पछि केही गर्लान् कि भन्ने ठानिएका निर्माण सामग्री बिक्रेताहरु आफू आफै मुनाफा तिर लाग्ने त कोही आफ्नै दुनो सोझ्उन लागेको देखियो ।
देशका लागि पनि केही गर्ने सोच नहुने हो भने निजी व्यवसाय छाडेर संस्थामा नआउँदा नै राम्रो हुन्छ नै । तर, यतिबेला उनीहरु बीचको आन्तरिक कलहले निर्माण सामग्री बजार दिनप्रतिदिन कालोबजारीमा परिणत भइरहेको छ ।
कुनै कारण विना डन्डी, सिमेन्टलगायत अन्य निर्माण सामग्रीको बजार भउ समेत मनलाग्दो गरी बढिरहेको छ । यसको मुकदर्शक बनेर हेर्नु बाहेक महासंघले कुनै पनि गतिवधि गर्न सकेको छैन ।
यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता सहित निर्माण सामाग्री व्यवसायीहरु पनि पर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित मितिकै दिन रातको ११ बजे अद्यावधिक गरिएको